होम स्टे बुकिङ्ग अब मोबाइल एप्स ‘भिजिट गण्डकी’ बाटै! - ParyatanBazar.com
होम स्टे बुकिङ्ग अब मोबाइल एप्स ‘भिजिट गण्डकी’ बाटै!
असार २९, काठमाण्डौ। गण्डकी प्रदेशका गाउँगाउँमा खुलेका सामुदायिक होमस्टेको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मोबाइल एप्स ‘भिजिट गण्डकी’ बनाइएको छ। त्यसैले अब सजिलै गण्डकी प्रदेशका ५० वटा उत्कृष्ट सामुदायिक होमस्टेको जानकारीसहित बुकिङ गर्न सकिनेछ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखराको आर्थिक सहयोगमा गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) नेपाल, गण्डकी शाखाले मोबाइल एप्स बनाएको हो। यसमा गाउँहरूको विषयमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा जानकारी, तस्बिर, नक्शा र भिडियो राखिएको छ। गाउँ घुम्न चाहनेहरूले सजिलै मोबाइलबाटै बुकिङ गर्न सक्नेछन्।
भिटोफ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज अधिकारीकाअनुसार एप्समा कास्की जिल्लाका ताङतिङ, कालाबाङ, घलेल, ल्वाङ, हयाङ्जाकोट, याङ्जाकोट, मिर्सा र भदौरे गाउँ समेटिएका छन्। त्यस्तै पर्वत जिल्लाका भुकदेउराली, चित्रे र लव्सीबोट गाउँ छन् भने स्याङ्जाका सिरुबारी, पित्लेक, सुन्तलाबारी, भैंसेगौडा, खिलुङ र कोल्मा गाउँको जानकारी दिइएको छ।
यस्तै तनहुँका टुटेपानी, फिरफिरे, कोरिखा, तनहुँसुर, करादिप, दुम्सीदरै र आँपस्वारा गाउँ छन्। अनि लमजुङका घलेगाउँ, राइनासकोट, काउलेपानी, भुजुङ, पसगाउँ र कुडुले छन्। बागलुङका भकुण्डे, बिहुँकोट, ढोरपाटन र कटेरी गाउँ छन्। मनाङका ओडार र ताचै गाउँ छन् भने मुस्ताङका ठिनी, स्याङ र मराङ गाउँ छन्।
यसरी पहिलो चरणमा समेटिएका म्याग्दीका गाउँहरूमा ताकम, झिँ र झाँक्रीपानी गाउँ छन् । साथै नवलपुरका अमलटारी, डेडगाउँ, प्रिपहर र लामिचौर गाउँ छन् भने गोरखाका लिगलिगकोट, बारपाक, पसलाङ र बेतिनी गाउँ।
एप्स बुम इन्टरनेशनलको प्राबिधिक सहयोगमा बनाइएको हो। यसमा ५० वटा गाउँको संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ भने अन्य तीन सय वटा होमस्टेको लिस्टिङ गरिएको छ। गाउँको विषयमा पर्यटन पत्रकार अमृत भादगाउँलेले लेखेका हुन्।
‘हामीले पहिलो चरणमा उत्कृष्ट ५० गाउँलाई एप्समा समेटेका हौं। क्रमशः अरु गाउँ थप्दै जानेछौं’, एप्स निर्माण समितिका संयोजक एवं ग्रामीण पर्यटनविज्ञ तारानाथ पहारीले भने, ‘यो एप्सले गाउँको प्रचार र होमस्टेको बुकिङ गर्न मद्दत गर्नेछ।’
भिटोफले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशिराज भण्डारीले मोबाइल एप्स शुभारम्भ गरेका थिए। शुभारम्भको खुसीमा सबैलाई शुभकामना बाँड्दै प्रमुख अतिथि भण्डारीले आगामी दिनमा डिजिटल मार्केटिङ र तालिमका कार्यक्रममा भिटोफ गण्डकीसँग निरन्तर हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा बुम इन्टरनेशनलका विजय देवान राई, भिटोफ केन्द्रका अध्यक्ष ध्रुब सिम्खडा, भिटोफका सल्लाहकारहरू टिकाराम सापकोटा र डा. रामजी शर्माका साथै पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले डिजिटल मार्केटिङमा ‘भिजिट गण्डकी’ मोबाइल एप्स कोशेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
भिटोफ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज अधिकारीकाअनुसार यस किसिमको डिजिटल मार्केटिङले ग्रामीण पर्यटन इतिहासमा नयाँ आयाम थप्नेछ।
विज्ञकाअनुसार सिंगो गाउँ पर्यटन प्रोडक्ट हो भने होमस्टे सुविधा गाउँ पर्यटनको एउटा अंग मात्र हो। होमस्टे सञ्चालक र घुमन्तेहरूबीचमा मार्केटिङको पुल नभएको अबस्थामा यो मोबाइल एप्स धेरै उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।
स्मरणिय छ, नेपालमा वि.सं. २०५४ सालदेखि स्याङ्जाको सिरुबारीबाट सामुदायिक होमस्टे सुविधासहित ग्रामीण पर्यटनको अभ्यास गरेको इतिहास छ। भारतीय सेनाका रिटायर्ड क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको परिकल्पना एवं अगुवाइमा सिरुबारीलाई नेपालको पहिलो पर्यटन गाउँ घोषणा गरिएको थियो। आज सिरुबारीलाई पच्छ्याउँदै गाउँगाउँमा सामुदायिक होमस्टेसहितको पर्यटन अभ्यास भैरहेको छ।